आज राति मृगशिरा उल्कावर्षा हुने, यी राशिलाई यस्तो असर पार्नसक्छ, के हो उल्कावर्षा, कसरी हेर्ने ? - jagritikhabar.com
आज राति मृगशिरा उल्कावर्षा हुने, यी राशिलाई यस्तो असर पार्नसक्छ, के हो उल्कावर्षा, कसरी हेर्ने ?
हेलीको पुच्छ्रेताराका कारण हुने मृगशिरा उल्का वर्षाको गतिविधि आज राति अत्यधिक देखिने नेपाल एष्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ । यो पुच्छ्रेताराका कारण वर्षमा दुई उल्कावर्षा हुन्छन् । हेलीको पुच्छ्रेताराले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा छोडेका धुलोका कणका कारण प्रत्येक वर्ष मे महिनामा ‘एटा एक्वारीएट’ र अक्टोबरमा ‘ओरियनिड’ उल्कावर्षा हुने गर्छ ।